Iintlanzi zangaphambili ezazihlala kwiplanethi yethu kwaye zisaphila nanamhlanje | Ngeentlanzi
Ngokokubonakala kwasekuqaleni, iintlanzi azizizo izilwanyana zakutsha nje, kodwa ubukho bazo banezigidi zeminyaka. Kule tekisi siza kuthetha ngezinye zezilwanyana ezazabelana ngendawo yokuhlala needinosaurs ngokwazo kunye nezinye izidalwa zamandulo. Sibhekisa kwinto ebizwa njalo iintlanzi zangaphambili.
6 Intlanzi yeLancetfish
I-Dunkleosteus yeyosapho lwentlanzi ye-arthrodylar placoderm (yayiyeyokuqala intlanzi enomqolo). Yayikhona kwixesha le-Devoni, malunga nexesha eliphakathi kweminyaka emi-380-360 yezigidi.
Le ntlanzi yamandulo ibonakaliswe yintloko eyaziwayo, enezixhobo ezinemihlathi emikhulu. Le mihlathi ibonakalisa iincakuba zamazinyo ezibulalayo. Imeko enjalo yamenza waba sesinye sezilwanyana zaselwandle ezibulalayo nezona zibulala zakha zabonwa.
Ngobungakanani obumangalisayo, kufutshane neemitha ezilishumi kunye nangaphezulu kweetoni ezintathu ubunzima, wayibeka kwindawo ephambili yokutya.
Iintsalela zokuqala zesi sidalwa sinomtsalane zafunyanwa nguJoy Terrell ngo-1867 kunxweme lweLake Iago Erie (eOhio). Ezi zinto zihlala zihambelana nommandla wekrele kunye neplate ye-thoracic dorsal. Nangona amathambo aliqela ale ntlanzi afunyanwa kamva, bekungekho ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX apho ukwakhiwa ngokuthe ngqo nangokuchanekileyo kwesona silwanyana sinokwenziwa.
Le ntlanzi ayifuni ileta yokugquma egqithileyo ukuze iqonde indima yayo ngexesha lokuphila kwayo, intsingiselo yegama layo ithi konke: "ikrele lokugqibela". Nangona kunjalo, ndiza kuzama ukukuxelela yonke into ngaye.
Le ntlanzi yayingamalungu eqela leentlanzi ezazisemanzini ezazibuyela eCretaceous. Elona khaya lalo ngqo lalisezantsi kunye nasemazantsi mpuma e-United States, kodwa ikwathanga ezinye iindawo ezikufuphi noMbindi noMzantsi Merika.
Yayisisilwanyana esinomzimba omde, ujikeleze i-4,3 yeemitha ubude, kwaye sinokufikelela kwiimitha ezi-6. Olona phawu lwayo luphambili yayiyimitha emathambo eyathi yaphuma kuyo yaza yaphela ingeniswa emaphikweni. Ezi ziphiko zamvumela ukuba adade ngobuchule kwaye afezekise ezo ntshukumo wayeza kuwabamba ngazo amaxhoba.
Kodwa izixhobo zakhe eziphambili zazisentloko. Intloko ethe tyaba, eyayinemihlathi emikhulu neyoyikisayo.
Kwaye ke Xiphactinus yaba irhamncwa ngoonobumba abakhulu. Kukholelwa ukuba ukuthanda ukutya okungonelisekanga kuyenze yabanoluhlu olubanzi lwezinto ezinokubakho, ezikhokelele ekutyeni kuzo zonke iintlobo zezilwanyana ezincinci, ukuya kufikelela kubazimi. Ubungqina bokugqibela kukuba iifosili zifunyenwe zibeka intsalela yemizekelo emincinci esiswini sabantu abadala.
Okokugqibela, ukuthetha ngaye ukuba ayinakuba sisilwanyana esizimeleyo, kodwa oko kwahambelana ubomi kumaqela amancinci kunye nenani elincinci leekopi.
I-Cretoxyrhina isenokuba yayiyeyokrebe wokuqala ukuzalisa umhlaba. Wahlala esiphelweni seCretaceous, malunga ne-100 yezigidi zeminyaka eyadlulayo okanye njalo. Ibizwa ngokuba yi "ginsu shark."
Lo krebe unokukhula aye kufikelela iimitha ezisi-7 ubude, ubungakanani obufana nobo kukakrebe omkhulu omhlophe namhlanje, ofana nawo ngokomzimba.
Yayisisilwanyana esidla inyama kunye nomzingeli ongumzekelo. Umhlathi wayo wawunabantu abaninzi abanamazinyo abukhali afikelela kwiisentimitha ezi-7 ubude. La mazinyo enza imihlathi emibini: ephezulu inamazinyo angama-34, kwaye ezantsi zinamazinyo angama-36, kumqolo ngamnye ocacileyo.
Yondla phantse zonke izidalwa zaselwandle ezazihlala ecaleni kwayo, ezazitshabalalisa ngokuluma kwayo okunamandla, okwathi ngokuluma nje oku nokujika kwentamo kwakwazi ukusika nawuphina umzimba. Alithandabuzeki elokuba yayisesinye sezilwanyana ezoyikwa kakhulu ngexesha laso, apho yayihlwayela uloyiko naphina apho yayihamba khona.
Enye yookrebe bangaphambi kwembali yayiyiSqualicorax, ethi, njengeCretoxyrhina, waphila ubomi bakhe ekupheleni kweCretaceous.
Inkangeleko yayo yangaphandle ngokuqinisekileyo yayifana nale yookrebe bale mihla, ngakumbi ngakumbi i-tiger shark. Ilinganiswe malunga ne-5 yeemitha ubude, nangona yayiqhele ukufunyanwa kubude obuphakathi kweemitha ezi-2. Ukuphakama kwakhe kwakungekho ngaphezulu kweemitha ezi-2.5-3.
Yabonelelwa ngamazinyo aliqela, awayeyivumela ukuba ithwale ukutya okungqongqo, kuba nokuziphatha okukhohlisayo ngamanye amaxesha.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ayizizo zonke iintlanzi ezingaphambi kwembali ezigqityiweyo ezaphela, kodwa kukho ezinye iintlobo ezichaseneyo nokuhamba kwexesha kwaye ziphakathi kwethu namhlanje. Emva koko siza kuveza iimeko ezithile:
I-hagfish okanye imixube ibekwe kwiqela leentlanzi. Zikwabizwa ngokuba ziintlanzi zobugqwirha okanye iihypotretos, kwaye kungoku nje kukho iintlobo ezingama-60 ezahlukileyo ezithe zadweliswa.
Zizintlanzi ezinemizimba emide egutyungelwe yinto ebonakalayo. Abanayo imihlathi. Endaweni yokuba zinamacandelo amabini afana neethendile kwaye enza iintshukumo zokuncancisa.
Bahlala bezondla nge-viscera, bekwazi ukungena emzimbeni wezilwanyana eziphilayo ukuze bazitye ngaphakathi, ngenxa yolwimi lwabo olu-serrated kunye nolusu. Baswele ii-receptors zemvakalelo, kwaye amehlo abo akaphuhlanga kakhulu.
Ziphakathi kwezona zilwanyana zamandulo zinomqolo yendalo ephilayo kunye nezilwanyana.
Xa ujonga iLancetfish akunyanzelekanga ukuba ube nolwazi kakhulu kwi-zoology ukuze wazi ukuba le ntlanzi ivela kumaxesha amandulo. Inembonakalo yokwenyani neyokwenene.
Eyona nto icinezelayo nebalaseleyo ngesi silwanyana inokuba yimihlathi yayo kwaye ihambe ngomqolo ngomqolo, enyanisweni ayiyonto ingaphezulu kokugqibela komva. Inokulinganisa ukuya kuthi ga kwiimitha ezimbini ubude.
Sisilwanyana esitya inyama yeentlanzi ezincinci, ii-crustaceans, ii-cephalopods, njl.
I-Arowana ntlanzi yeqela le-osteoglosides, izilwanyana ezazikho ngexesha leJurassic. Esi silwanyana sihlala kwindawo zoMlambo iAmazon kunye neAfrika, Asia kunye neAustralia.
Zizilwanyana ezizodwa kakhulu, kuba ziyakwazi ukutsiba ukuya kwiimitha ezimbini ngaphezulu komphezulu wamanzi. Lo mthamo usetyenziselwa ukubamba iintaka okanye ezinye iintlobo zezilwanyana. Oku kuyabamema ukuba babahlule njengezidlakudla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yokuqala